गितामा के छ ??? -
१३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५ April 16, 2020 khullapatiLeaveaComment on गितामा के छ ???
महाभारतको युद्धमा अर्जुनले आफ्ना सारथी बनेका श्रीकृष्णलाई अनेक प्रश्न गर्छन् । अर्जुन र कृष्णबीच चलेको त्यही प्रश्नोत्तरबाट श्रीमद्भागवत गीताको रचना भएको हो । भनिन्छ, सबै वेद, उपनिषद् पुराणको निष्कर्ष नै गीता हो । गीता १८ अध्यायमा लेखिएको छ ।
त्यसबेला अर्जुनलाई दिएको उत्तरहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । कुरुक्षेत्रको युद्धमा श्रीकृष्णले जुन गीताको ज्ञान अर्जुनलाई दिएका थिए, त्यो सन्देश पुरा मानव जातिको लागि उपयोगी छ । यदि हामीले भागवत गीताको केही ज्ञान हाम्रो जीवनमा आत्मसात गर्ने हो भने कष्ट, तनाव, द्विविधा, भ्रम आदिबाट मुक्त हुन्छौं ।
-वितेको समय र आउने समयको चिन्ता नगर । किनभने जे हुनुछ, त्यो भएरै छाड्छ । जे हुन्छ, राम्रो हुन्छ । यसैले वर्तमानको आनन्द लिनुहोस् ।
– नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्प्रदाय, धर्म, स्त्री वा पुरुष हामी होइनौं न यो शरीर नै हामी हौं । यो शरीर अग्नी, जल, वायु, पृथ्वी, आकाशबाट बनेको हो र अन्ततः यसैमा विलय हुन्छ । तर, आत्मा स्थिर छ र हामी आत्मा हौं । आत्मा कहिल्यै मर्दैन । न यसको जन्म हुन्छ, न मृत्यु । आत्मभावमा रहनु नै मुक्ती हो ।
-परिवर्तन संसारको नियम हो । यहाँ सबैकुरा बद्लिन्छ । यसैले सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, मान-अपमान आदि भेदमा एक भावमा स्थित रहेर हामीले जीवनको आनन्द लिन सक्छौं ।
-आफ्नो क्रोधमाथि नियन्त्रण गर । क्रोधले भ्रम पैदा गर्छ । भ्रमले बुद्धि विचलित हुन्छ । यसले स्मृति नष्ट गर्छ र यसप्रकार मानिसको पतन सुरु हुन्छ । क्रोध, कामवासना र भय यी हाम्रो शत्रु हुन् ।
-आफुलाई ईश्वरमा समर्पण गर । उनैले हाम्रो रक्षा गर्नेछन् । हाम्रो दुःख, भय, चिन्ता, शोक र बन्धनबाट मुक्त गराउनेछ ।
-हामीले आफ्नो दृष्टिकोण शुद्ध गर्नुपर्छ । ज्ञान वा कर्मलाई एकै रुपमा देख्नुपर्छ ।
-अशान्त मनलाई शान्त राख्ने अभ्यास गरौं । अन्यथा अनियन्त्रित मन हाम्रो शत्रु बन्नेछ ।
-हामीले जस्तो कर्म गर्छौं, त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ । यसैले कर्म गर्नुअघि विचार गर्नुपर्छ । सबैप्रति समताको भाव, सबै कर्ममा कुशलता र दुःखरुपी संसारबाट वियोगको नाम योग हो ।
फरार सुचीमा रहेकी राउत पक्राउ, म्याद थपेर थुनामा राख्ने तयारी
इम्युन सिष्टम र कोरोना कनेक्शन : बँच्न के गर्ने ? शुक्रबार हुँदैछ बहस
३० बैशाख २०७७, मंगलवार १९:५८ May 12, 2020 khullapati
अब पाठ्यक्रम र परीक्षा पद्धति बदल्ने बेला आयो : महाश्रम शर्मा (भिडियोसहित)
२० बैशाख २०७७, शनिबार ०८:२३ May 2, 2020 khullapati
तीन जिल्लाका सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइयो १३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५
काठमाडौँमा अझै १८ हजार बढी निरक्षर १३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५
सूर्यविनायक नगरपालिकाले आजदेखि विद्यालय खोल्यो १३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५
आज राष्ट्रिय बाल दिवस, विविध कार्यक्रम गरी मनाईँदै १३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५
सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाइयो ऋषि पञ्चमी पर्व १३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५